Kuwaas oo ah Tareenadu sida dhaqsaha badan In Europe Oo Adduunka | Save A tareenka
Home > safarka Europe > Kuwaas oo ah Tareenadu sida dhaqsaha badan In Europe Oo Adduunka
Waqtiga Akhriska: 4 daqiiqo(Last Updated On: 27/09/2020)
Weligaa ma doonayay in ay booqdaan Europe wax guridda, sida tareenka? Sidee ayey ka dhawaajiyaan in ay u safraan ilaa 300 kiiloomitir saacaddiiba? Europe ayaa network weyn ee tareenada-xawaaraha sare ee in si deg deg ah idiin qaadan doonaa si aad u socoto. adeegyada tareen xawaare sare oo keliya joojin magaalooyinka ugu waaweyn. tareenada The bixiyaan gaadhi raaxo ee 1aad iyo fasalka 2aad, iyo sidoo kale wanaagsan adeegyada cuntada. Halkan badan oo ku saabsan ugu dhaqsaha badan tareenada ee Europe.
Alfa Pendular The safaradiisa xeebta ee Portugal, ka Braga in ay Faro iyo istaago in Porto, Coimbra, iyo Lisbon. In ka yar 6 saacadood, aad gaari kartid dhinaca kale ee dalka oo wuxuu ku raaxaysan goobaha fiican on board.
Alvia tababartay in Europe
Alvia The, Waa Tareenadu sida dhaqsaha badan Isbaanish ee u tartamaya Europe, safraan masaafo dheer xawaare ilaa 250 kiiloomitir saacaddiiba. Waxaa intaas dheer in isku xira magaalooyinka waaweyn ee Spain, tareen this sidoo kale waxay bixisaa adeegyada casriga ah. Kuwaasi waa kursi dangiigsan weyn leh in ka badan meel ku filan lugaha, miiska laabanto, iyo audio iyo video saarka.
tareenada ICE in Europe xirmaan oo dhan magaalooyinka waaweyn ee Germany iyo magaalooyin badan oo ka socda wadamada deriska. Tani tareen-xawaaraha sare ee casriga ah adeegyada saacaddii waxay bixisaa badan: iyo waxyaabo kale, gaadhi la qaboojiyaha, boos weyn u fidin lugaha, screens video iyo nidaamyada audio. ICE waxay kuu kaxayn doontaa meelkasta oo Jarmalka ah waana hab fiican oo loogu safro dalal kale, sida Austria, France, iyo Switzerland.
Fallaaro tareenada (oo hore loogu yaqaanay Eurostar Italia) samaysan shabakad casri ah oo xawaare sare oo ay ku jiraan tartamaya Talyaaniga ee Tareenadu sida dhaqsaha badan ee Europe. safarka la Fallaaro inay ku raaxaystaan ​​xiriir degdeg ah wadnaha magaalooyin badan Talyaani sida Rome, Venice, Florence, Milan, Verona, iyo Naples. Waxaa jira saddex nooc oo ah tareenada Le Frecce in aad loo hubiyo xidhiidh ugu dhaqsiyaha badan ee suurtogalka ah ma aha oo kaliya in magaalooyinka ugu caansan ee Italy, laakiin sidoo kale in magaalooyinka yaryar ee baadiyaha Talyaani.
Eurostar ka yar yahay guusha badda Tareenadu sida dhaqsaha badan ee Europe ee
The tareen-xawaaraha sare ee Eurostar waa habka ugu fiican ee safarka ka London si ay u Brussels ama Paris. tareenka wuxuu kuu qaadi doonaa iyada oo loo marayo Channel Tunnel wadnaha ee London. quuska Travel halka riyaaqayaa oo dhan waan qalbiqaboojin ee tareen-xawaaraha sare ee casriga ah.
Kuwani tareenada-xawaaraha sare ee ay maamulaan u dhexeeya Austria, Czech Republic ee, Germany, Hungary, iyo Switzerland. tareenada Railjet yihiin dad lagu daydo gobolka-of-the-art in la siiyo maroojin ah in ay waayo-aragnimo safarka by bixiya adeeg-xawaaraha sare leh raaxada weyn. goobaha saarnaa cajiib ah iyo adeegyada aad u fiican yihiin qaar ka mid ah sifooyinka. Xawaaraha ilaa 230 kiiloomitir saacaddiiba waxaa lagu gaaray. Railjet wuxuu kuu ogol yahay in ay u safraan Austria oo dhan iyo sidoo kale dalalka deriska ah sida Germany, Switzerland, iyo Hungary.
TGV – Ma qaado, waayo, Tareenadu sida dhaqsaha badan In Europe our
Kaxaynta oo dhan France iyo wixii ka dambeeya, TGV heysta rikoorka xawaaraha dunida tareenada caadiga ah. on 3 April 2007, Tareenka TGV POS ayaa gaadhay 357.2 mph (574.8 km / h), waxaa tareen shanaad ugu dhaqsiyaha badan ee Europe samaynta. TGV trainset ayaa xitaa gaaray 515.3 km / h (320 mph) hoos marna carqaladeeyey by xaaladaha imtixaanka gaarka ah iyo xaaladaha cimilada sida ceeryaanta cufan ama wax kale.
Tareen Grande Vitesse idiin qaadan doonaa on a safar tareen taataabtay Paris ama meel kasta oo ay weheliyaan xeebaha Mediterranean haddii aad si, fadlan. Iibso tigidh TGV iyo qaadi filim in caansan dunida ee Cannes oo wuxuu ku raaxaysan beero canab ah u qurux badan Dooxada Loire ah, dabadeedna. Add u quudhin yar oo dheeraad ah si aad kortaan by magaalooyinka booqanaya sida Marseille, Lyon, iyo Bordeaux.
The SJ Swedish-xawaaraha sare waa mid ka mid ah tareenada ugu dhaqsiyaha badan ee Europe si gaar ah loogu talagalay dhul Scandinavian iyo orod xawaare ah ilaa 200 kiiloomitir saacaddiiba. Tareenada waxay bixiyaan heer sare ah raaxada iyo oggolaadaan in aad si deg deg ah u safraan xarunta magaalooyin badan Swedish sida Stockholm, Gothenburg, iyo Malmo. Kuwani tareenada-xawaaraha sare sidoo kale si toos ah u Copenhagen safraan (Denmark) via wadada dheer iyo buundada tareenka ee Europe, Öresund ee cajiib ah Bridge.
New guridda hal - tareenka dhaqsaha badan ee Europe u bixiyaan in ay suuragal. Dooro tareen ka mid ah liiska kor ku xusan iyo annagu waxaan nahay u hubiso in aad ku raaxaysan doonaa waayo-aragnimo ee aad ka heli.
Waxaad ballansan kartaa tareenada tigidhada ka mid ah tareenada sida dhaqsaha badan ee Europe oo ku saabsan Save-A-tareenka in ku dhow caga kasta ka sarreeya diiwaangeliso 3 daqiiqo, at the jaban heerka tigidhada tareenka iyo gargaartay ajuurada jaale isnacsiiyeen!
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, ka dibna riix halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fwhich-are-the-fastest-trains-in-europe-and-the-world%2F- (hoos u riixdaa si aad u aragto Code Cudarada ah)
#xargaha #tareen sare talooyin tareenka tareen safarka